5 Ways Faa'iidooyinka Tafaariiqda ee La Socodka Bulshada ee Hyperlocal | Martech Zone
Shirkadaha tafaariiqda waxay la tartamayaan shirkadaha waaweyn ee tafaariiqda ah sida Amazon iyo Zappos. Dukaamada tafaariiqda-iyo-hoobiye tafaariiqda ayaa ujeedkoodu yahay inay siiyaan khibrada ugu fiican macaamiishooda. Gawaarida cagaha waa cabbiraadda dhiirrigelinta iyo xiisaha macaamiisha (muxuu shakhsigu u doorbiday inuu u yimaado dukaanka si uu wax u iibsado marka ikhtiyaarka wax iibsiga khadka tooska ah la heli karo).
Faa'iidada tartanka ee dukaanley kasta oo ka badan dukaan internetka ayaa ah in macaamilku u dhow yahay oo uu diyaar u yahay inuu wax iibsado. Dadaallada suuq-geynta ee ku saleysan goobta ayaa si aad ah loo sii sifeynayaa waxayna siinayaan siyaabo badan oo badan oo macaamiisha looga hor mariyo albaabkaaga iyo iibsasho.
Waa maxay Suuq geynta Hyperlocal?
Suuqgeynta 'Hyperlocal marketing' runti wey ka yara dheeraatay internetka. Cable, wargeys, iyo suuqleyda tooska ah waxay awood u yeesheen inay bartilmaameedsadaan suuq geynta kooxo aad iyo aad u cufan oo isugu jira guryo iyo ganacsiyo si shakhsi ahaaneed loo gaarsiiyo. Hore u sii soco hadda iyo hyperlocal guud ahaan waxaa loola jeedaa awooda lagu dhex galo warbaahinta internetka ama mobilada isla markaana la ogaado meesha saxda ah ee rajada laga qabo, iyadoo loo fidinayo dalabyo waqtigooda ku habboon iyaga maadaama ay gaarayaan meel gaar ah
Waa maxay Suuqgeynta Omni-Channel?
Suuqgeynta 'Omni-Channel' waxaa loola jeedaa dallacsiinta iyo xayeysiinta oo si xeeladeysan loogu abaabulay dhammaan kuwa la heli karo lana dhexdhexaadin karo si loo gaaro isla rajadaas. Marka laga soo tago dukaanka tafaariiqda dhabta ah, isgaarsiinta goobta-dhow (NFC), suuq u dhowaanshaha, SMS iyo MMS, Barnaamijyada Mobilada, Suuqgeynta Emailka, Telefishinka, Raadiyaha, Boostada Tooska ah, Catalogs iyo fursado kale ayaa looga faa'iideysan karaa si kor loogu qaado dalabyada macaamiisha mustaqbalka iyo ganacsiyada.
Wax-ku-ool ah Istaraatiijiyadda iibka dhibic-iibka ayaa fure u ah guusha shirkadaha tafaariiqda. Ka faa'iideysiga tikniyoolajiyada ku saleysan goobta si loola socdo warbaahinta bulshada loona ogaado rajada ayaa ah qaab macquul ah oo la isku halleyn karo oo wax ku ool u ah suuqgeynta macaamiisha mustaqbalka.
Suuqgeynta Omni-channel iyo wacyigalinta ayaa lagama maarmaan u ah shirkadaha tafaariiqda maadaama ay ciriirineyso farqiga khibrada dalwaddii iyo khibradii leben-iyo-dukaanka. Tusaale ahaan, Dukaanka Apple, Naqshadaynta, Hawlgallada habsami-u-socodka ah, iyo adeegga macmiilka ee xamaasadda leh ayaa ku ammaanaya adeegyadooda khadka tooska ah sida iTunes, App Store (talooyin), iwm.
5ta Ways Goobaha Tafaariiqda ayaa Ka Faa'iidaysta Kormeerayaasha Bulshada ee Hyperlocal
Gaarsiinta Halka rajadaadu tahay mid feejigan - Kormeerayaasha Bulshada ee 'Hyperlocal Social Monitor' waxay u dhaqmi karaan labadaba habab firfircoon oo dadban. Haddii isticmaale soo dhejiyo Tweet khadka tooska ah, waxaa jira waqti go'an (qiyaastii 2-3 daqiiqo) halkaas oo isticmaaleha uu filayo jawaab, cod, ama ra'yi boostadaas. Haddii shirkadaha tafaariiqda ay ka soo jawaabaan daaqaddaas gudaheeda, waxay heli doonaan feejignaanta buuxda ee macaamiisha. Jawaabtu waa inay bixisaa wicitaan ficil, ama dhis wadahadal.
Guulihii Shakhsi ahaaneed - Suuqgeyntu waxay waxtar leedahay marka ay shaqsi ahaan ka sii badato oo ay khusayso aagga laga hadlayo. Iyadoo loo marayo Kormeerayaasha Bulshada ee Hyperlocal, shirkadaha tafaariiqda waxay wax ka qaban karaan baahiyaha aagga si wax ku ool ah oo hufan, waxayna dhisi karaan xiriir dhow oo u dhexeeya astaanta iyo macaamilka.
Beegsiga Saameeyayaasha Bulshada - Saameeyayaasha bulshada laguma ogaan karo kaliya iyaga oo fiiriya. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah kormeerayaasha bulshada ee Hyperlocal waxay bixiyaan qalab lagama maarmaan ah iyo astaamo bixin doona aragti qoto dheer oo ku saabsan isticmaalaha warbaahinta bulshada ama macaamiisha. Dhibcaha Klout, kuwa raacsan, ama xitaa tirada saaxiibbada ayaa ah tilmaamayaal muhiim u ah muhiimada uu leeyahay qofka waayo aragnimadiisa inta lagu gudajiro adeegistiisa. Abaalmarinta abaalmarinta waxay noqon doontaa habka ugu fudud uguna wanaagsan ee lagula xiriiro macaamiisha cusub ee maxalliga ah loona xoojiyo astaanta maxalliga ah.
Goobta Iibintu waa Fure - Macaamiisha ayaa adeegsada warbaahinta bulshada si ay ula xiriiraan adduunka si ay uga helaan fikrad waxa ay rabaan inay iibsadaan. Dhiirrigelinta wax iibsiga, iyada oo la wadaagayo iibinta maalintaas, ama dhibcaha abaalmarinta ee la helay… iwm macmiilku wuxuu noqon doonaa mid dhiiran oo u badan inuu iibsado sheyga. Macaamiisha marwalba kama warqabaan heshiisyo waawayn, oo iyaga in lala socodsiiyo waxay kadhigi doontaa iyaga kuwo faraxsan waxayna dhisaan dareen aamin ah oo leh astaanta.
Cabir Guul - Wax yar oo ka mid ah qalabka warbaahinta bulshada ee 'Hyperlocal Media' ayaa bixiya shaqeynta u suurta gelisa ganacsiyada inay cabbiraan guusha istiraatiijiyadooda warbaahinta bulshada. Haddii ay tahay mid isku dhafan CRM, BI, ama isku darka xogta warbaahinta bulshada (dareenka, saameynta, gaarista) iyo jaangooyooyin tafaariiqda ah, dhammaantood hadda waa suurtagal mahadsanid teknolojiyad isweydaarsi - sida API-yada iyo teknolojiyada daruuraha.
Ku saabsan WeLink Hyperlocal Kormeerka Bulshada
WeLink's aaladda la socodka bulshada, WeLink Social, waxaa loogu talagalay in lagu gaaro jiilka jihada-deegaanka ee jiilka. Hadafkeenu waa inaan ka helno dhagaystayaashaada kaliya maaddada muhiimka ah, laakiin ka hel dhagaystayaashaada goobta, ama aagga, xiisaha.
Isticmaalka WeLink Social's ad-dayrka qalabka kormeerka, suuqyadu wuxuu si fudud u dul saari karaa barta meesha tafaariiqda, dejisa gacan ku haynta xiisaha, iyo marin u helidda xogta baraha bulshada oo leh labada eray ee muhiimka ah iyo kuwa isticmaala baraha bulshada ee aagga ku dhow.
Suuqa wuxuu baari karaa dareenka, wada sheekaysiga, dib u eegista iyo sawirada lagu soo rogay baraha bulshada iyadoo loo marayo shabakadaha sida Twitter, Instagram iyo Foursquare. Barxadda ayaa markaa waxay siisaa fursad ay kula macaamisho macaamilka xiisaha iyaga oo siinaya dhiirigelin - ha ahaato qaab rasiidh, qiimo dhimis, talooyin ama macluumaad - si ay u soo booqdaan goobta.
Tags: xogta gacantaxad -dhaaf ahsuuq geynta hyperlocaltafaariiqda hyperlocalmaxaliga ahsuuqgeynta ku saleysan goobtaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaxogta mobiladaxogta guurinta-moobiilkanathan chandradhow isgaarsiinta goobtaNfcsuuq geynta omni-channeldhowsuuq u dhowaanshahaSuuq geynta dukaamadadukaanka tafaariiqdaMedia Social Suuqkaliwelink
Nathan waa Aasaasihii WeLink, kormeer baraha bulshada ah iyo barxad xayeysiis bartilmaameed ah oo kaxeeya qiimaha laga helo wada hadalka bulshada ee ku saleysan goobta, taas oo u oggolaanaysa suuqleyda inay ku shaandheeyaan tiro aad u tiro badan oo xog bulsho ah oo ku jirta dashboard casri ah oo fudud.
Sida Loo Cabiro Soo Noqoshada Maalgashiga Warbaahinta Bulshada